Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » देउवा प्रधानमन्त्री बन्न किन डराए ?
देउवा प्रधानमन्त्री बन्न किन डराए ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस ‘जिम्मेवारी आएमा भाग्दैन’ भनेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपटक किस्तीमा पटक पटक आएको प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेका छैनन् । उनलाई किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद लिएर बुढानिलकण्ठमै नेताहरु पुगिसकेका छन् । तर, जवाफ दिएका छैनन् । आखिर देउवाले किन यस्तो गरे ?
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल १२ फागुन र त्यसभन्दा अघि पछि देउवालाई बुढानिलकण्ठमै पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्न पुगे । तर, देउवाले कदम चालिहालेनन् । उनले निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरे । सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँतियो । त्यसपछि पनि देउवाले हतार गरेका छैनन् ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढ्न प्रस्ताव पुगेको छ । तर, उनी ढुक्क भएका छैनन् । काँग्रेसभित्रै देउवा मौन बसेकोमा आशंका उठ्न थालेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसबारे प्रश्न गरेका छन् । देउवा आफू अघि नबढे विकल्प खोज्न भनिएको छ । देउवापछि विकल्पमा बढ्नसक्नेमा प्रकाशमान सिंह र डा. सशांक कोइराला हुन् । तर, देउवा उनीहरुको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
देउवाले अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढिहाल्ने साहस बनाउन सकेका छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै कठोर कदम चालेर अप्ठ्यारोमा पार्ने हुन् कि भन्ने छ । ओलीले एकपछि अर्को कठोर कदम चालेर विरोधीलाई कमजोर पारेका छन् । देउवाको ओलीसँगको अदृश्य समिकरण छ जसलाई उनी टुटाइहाल्न चाहँदैनन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदा आफ्नो नामसहित गएमा जसपाले धोका दिने हो कि भन्ने डर देउवालाई छ । जसपा आफै सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । जसपा नेता महन्थ ठाकुर अगाडि बढेका छन् । काँग्रेसमा रहँदा पनि ठाकुर देउवा विरोधी तत्कालिन संस्थापन पक्षमा थिए । त्यसैले ठाकुर समूहबाट साथ नहुनसक्ने भ’य देउवालाई छ ।
देउवालाई अर्को ड’र महाधिवेशनको छ । प्रधानमन्त्री भइहालेर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेमा असर १४ औं महाधिवेशनमा पर्न सक्छ । त्यतिबेला देउवाका लागि काँग्रेस सभापतिको पद नै गुम्न सक्छ ।